Muxuu salka ku hayaa safarka uu madaxweyne Farmaajo ku tagay Jabuuti? - BBC News Somali
Image caption Madaxweyne Farmaajo ayaa gaaray Jabuuti
Wafdi uu hoggaaminayo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaalia Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa galinkii dmabe ee maanta gaaray Magaalada Jabuuti, Madaxtooyada Soomaaliya ayaana faahfaahineysa waxa uu salka ku hayo safarkan.
Ra'iisul wasaaraha Jabuuti Cabdiqaadir Kaamil Maxamed iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas Maxamuud Cali Yuusuf ayaa garoonka diyaaradaha ku qaabilay wafdiga Farmaajo, waxayna kulan gaaban ku yeesheen hoolka martida ee ku yaalla gegida gudaheeda.
Image caption Ra'iisul wasaaraha Jabuuti ayaa soo dhaweeyay wafdiga madaxweynaha
Hase yeeshee, madaxtooyada Soomaaliya ayaa meesha ka saartay in safarka madaxweynaha uu daba socdo ama xiriir la leeyahay socdaalkii wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Kenya iyo kulankii ay la yeelatay mas'uuliyiinta Jabuuti.
Mar uu ka jawaabayay su'aal ku saabsaneyd in safarka Farmaajo ee Jabuuti uu la xiriiro muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya iyo waliba booqashadii Monica Juma ayuu yiri: "Annaga nama khuseyso wasiir kale iyo wufuud ka socotay dal kale oo halkan timid, waxa na khuseeya waa waxa annaga iyo walaalaheenna Jabuuti naga dhaxeeya, waa waxa aan annaga iyo Jabuuti iska kaashan karno, taas ayaana ahmiyad noo leh, Marka Monica iyo cid walba ayaa iman karta halkan, Jabuutina waa dal xor ah".